Mareykanka oo ka horyimid muddo kororsiga ay sameeyeen Golaha Shacabka – Banaadir Times
By banaadir 13th April 2021 74 No comment
Guddiga xiriirka dibadda Aqalka Sare ee waddanka Mareykanka ayaa kasoo horjeestay muddo kororsiga ay Xildhibaannada Shacabka u sameeyeen hay’adaha kala duwan ee dowladda federalka ah ee Soomaaliya.
Qoraal kooban oo lagu daabacay barta Twitter-ka Senator Bob Menendez oo ah Madaxa Xiriirka Arrimaha Dibadda ee Aqalka Senate-ka ayaa waxaa lagu sheegay in tallaabadaas ay curyaamineyso geedi socodka lagu baadi goobayo qabashada doorasho lagu kalsoonaan karo.
“Doorashooyinka waqtigooda dhaca waa tiir muhiim u ah dimuqraadiyadda caafimaadka qabta. qorshaha muddo kordhintu waa jebinta qawaaniinta dimuqraadiyadda & halista xasilloonida Soomaaliya ayaa waxaa agu yiri’ Qoralka Sanoter-ka.
Ugu dambeyn waxaa uu ugu baaqay Daneeyayaasha inay gaaraan is afgarad, isla markaana la joojiyo isku dayga lagu wiiqayo wadahadalka oo ah wadada loo maro doorashooyinka lagu kalsoon yahay.
Warkan kasoo baxay Guddiga xiriirka dibadda Aqalka Sare ee waddanka Mareykanka ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli Wakiilada Beesha Caalamka aysan weli ka hadlin Go’ankii Golaha Shacabka muddo kordhinta ugu sameeyeen Hay’adaha dowladda.
Puntland oo gacanta ku dhigtay Askari dil geystay
James Swan oo Farriin u diray Shacabka Soomaaliyeed
Xuska Maalinta Ciidanka Xoogga dalka oo Maanta ku beegan
By banaadir 12th April 2021
Xukuumadda Xil-Gaarsiinta Oo Ka Hadashay Shirka Madaxda Uga Socda Afisyooni
By banaadir 3rd April 2021
Burcad loo heysto dilka Ganacsato Soomaali ah oo lagu qabtay K/Afrika
By banaadir 25th February 2021